Ururrada bulshada rayidka oo ka hadlay doorka uga aadan hiigsiga cusub (Sawirro) – Radio Muqdisho
Kulankani oo ay soo agaasimeen Hey’adda Jilaayasha aan dowliga aheyn ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya SOSCENSA ayaa waxaa ka soo qeyb galay qaar ka mid ah qeybaha kala duwan ee ururrada bulshada ku nool magaalada Muqdisho, waxaana ujeedka kulanka uu ahaa sidii shacabka Soomaaliyeed ay ugu qeyb qaadan lahaayen Hiigsiga cusub ee dalka.
Intii uu kulankaasi socday ayaa waxaa looga dooday aragtida ay bulshada Soomaaliyed ka qabto hiigsiga cusub ee dalka, sidii dadka ay isaga kaashan lahaayen horumarka iyo dib u dhiska dalka.
Guddoomiyaha Hey’ada Jilaayasha aan dowliga laheyn ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya SOSCENSA Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo lahadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in shirka ay isku weydaarsadeen talooyin ku saabsan sida looga faa’iideysan karo hiigsiga cusub.
“Hiigsiga cusub ayaan ka hadalnay oo ku saabsan sida ay bulshada uga faa’iido karto, waa barnaamij aad u wanaagsan, waxaan rabnaa in ururrada bulshada laga siiyo talooyinka uga aadan, isla markaana dowladda iyo Maamul goboleedyada dalka ay isku raacaan sidii qorshe wada jir ah ugu gudbin lahaayeen beesha caalamka” ayuu yiri Cabdullaahi Maxamed Shirwac.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa gudaha dalka iyo dibadiisa waxaa ka socday shirar iyo kulamo looga hadlayo sidii bulshada Soomaaliyed ay uga qeyb qaadan lahaayen hiigsiga cusub dalka.
Wasiirka Difaaca oo kormeer howleed ku tagey Xarunta Ciidanka Badda Soomaaliya "SAWIRRO"